अब फुटबल खेल्दिनँ देशमा रहँदा उनीहरु दुःख बोल्दैनन्। बोलि दबाइने समाजमा नबोलिएका कुराहरु झनै छोपिन्छन्। यसैले दबिएका ती उकुसमुकुस पलायनसँगै बाटो खोज्छन्। निस्कन्छन्। अहिले फुटबल खेलाडी हेमन गुरुङलाई ठीक त्यस्तै भइरहेको छ। ती कठीन दिनहरुले झस्काइरहन्छ। दुःखपछि सुख, रातपछि दिन आउँछ भन्नु उनका लागि काल्पनिक बिम्बबाहेक केही भएन। सोमबार, भदौ १५, २०७७
सनसनीपूर्ण हारले उब्जाएका प्रश्नैप्रश्न फराकिलो गोल अन्तरले पराजित भएसँगै बार्सिलोना टिममा प्रश्नको उत्तर खोज्न थालिएको छ। बार्सिलोना कमजोर टिम हो? बार्सिलोनाको स्तर घटेको... शनिबार, साउन ३१, २०७७
खेलकुदमन्त्रीका अघि सचिवले भने- योजनाबिना जहाँ पनि बोलिदिनु भएन, बजेट छैन सबैले उही प्रक्रियामा बोलिरहँदा कार्यक्रममा फरक विषयका कारण केन्द्रमा देखिए मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया। आफूले मन्त्रीको चाहना... बुधबार, साउन १४, २०७७
‘यु विल नेभर वाक एलोन’ लिभरपुलले उत्साहको नयाँ रात गजवले बितायो। विश्वभरका समर्थकसँगै। ३० वर्षको पर्खाइले होला लिगको उपाधि गएका वर्षभन्दा भिन्न लाग्यो। आफ्... बिहीबार, साउन ८, २०७७
खेलाडीको सम्मान कि आफ्नो प्रचार? सरकारको प्रमुख उपलब्धीमा परेको साग आयोजनामा यतिका पदकको प्रचार हुने नै भयो। त्यसमा नै जोडिए सम्मान गर्नेहरु। प्रमाणपत्र, माला, खादाद... बुधबार, साउन ७, २०७७